‘विकास प्रेमी’ अर्जुनलाल प्रधानको ठमेलमा नामै काफी, पर्यटन विकासका लागि उनले नयाँ ‘भिजन’ लागू गर्ने
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । माघ महिना, जाडो छल्न मान्छेहरु तातोको खोजीमा छन् । जाडो छल्ने र तातोमा रम्ने ठाउँका रुपमा पनि चिनिएको ठमेल क्षेत्रमा भने माघ १६ गते हुने ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को २४औं साधारणसभाले छोएको छ । तातेको छ ।
नयाँ नतृत्व समेत चयन हुने भएपछि ठमेल पर्यटन विकास परिषद् पनि नतात्ने कुरै भएन ।
विशेषगरी परिषद्को आगामी नेतृत्व हाँक्न भन्दै समाजसेवी अर्जुनलाल प्रधानले आफ्नो नाम सार्वजनिक गरेलगत्तै नयाँ तरंग नै आएको देखिन्छ ।
अर्जुनलाल एक कदम अघि
प्रधानको उम्मेदवारीलाई आफूभन्दा ‘एक कदम अघि’ बाजी मार्न सफल रुपमा सम्भावित अरु प्रतिस्पर्धीले पनि हेरेका छन् ।
अध्यक्षका सम्भावित भनिएका प्रत्यासीहरुले नै ‘अर्जुनलालको लोकप्रिय युवा नेता हो’ भनेर स्वीकार गरिसकेपछि चर्चा नहुने पनि कुरै रहेन ।
प्रधानको उम्मेदवारी नै अरुको भन्दा बढी चर्चामा रहनुका पछाडि धेरै कारणहरु हुन सक्छन् । स्थानीय ठमेल क्षेत्रमा ‘विकास प्रेमी’को गहिरो छाप बनाएका यी युवाले ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को नेतृत्व हाँक्ने अवसर पायो भने ‘केही नयाँ काम चैं अवश्य गर्छ’ भन्ने छाप परेको रहेछ ठमेलका पर्यटन व्यवसायीहरुका आँखामा ।
अर्जुनलाल चर्चाको कडी !
उनको उम्मेदवारी चर्चामा आउनुको अर्काे महत्त्वपूर्ण कारण भनेको, प्रकाश नरसिंह राणाको समर्थन पनि हो । ‘आउट गोइङ’ अध्यक्षका रुपमा रहेका समीर गुरुङले अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुन सक्नुमा राणाको हातलाई मानिन्छ ।
सबै स्थानीय पर्यटन उद्यमीहरुका बीचमा स्थापित अर्जुनलाललाई यतिबेला उनले पनि समर्थन गरेका छन् ।
पर्यटन विकास परिषद् ठमेलमा यही कारणले पनि फरक तरंग आएको हो । त्यस अतिरिक्त उनलाई सबै पर्यटन व्यवसायीको साथ रहने देखिन्छ ।
‘उनको कार्यशैली नै मन पर्छ,’ निर्माण मिडियासँग बोल्दै नाम नबताउने सर्तमा एक पर्यटन व्यवसायीले ठमेलमा भने, ‘उनी सबैका लागि काम गर्छन् । वर्षौं पिच नभएको यो एरियाको सडक आज पिच गराउन पनि उनले नै नेतृत्व गरे । काम गर्ने मान्छेलाई त जसले पनि रुचाउँछ नि !’
परिषद्मा हालको कार्यसमिति सदस्य समेत रहेका प्रधानले यसअघि पनि अध्यक्षको दाबी गरेका थिए ।
प्रधानले भने, ‘यस पटक त उम्मेदवार बन्नकै लागि म अघि बढिसकेँ । तर यस अघि अरुसाथीहरुलाई जिताउन म आफैं पनि लागेको त हुँ नि !’
उनले थपे, ‘अरुलाई पनि नेता मानेर काम गर्न सक्ने क्षमता भएको हुनाले उनले साथीभाइहरुलाई जिताउने भूमिका खेलेको’ निर्माण सञ्चारलाई बताए ।
कति छन् मतादाता ? किन तोकिएन स्टेन्डर्ड तालिका अनुसार मिति ?
२ वर्षका लागि १७ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गर्ने यो निर्वाचनमा करिब साँढे ४ सय मतादाता सहभागी हुने छन् । यद्यपि, परिषद्को नेतृत्व चयन गरिने साधारण सभाको स्टेन्डर्ड समय तालिका भने माघ २६ गते रहेको छ ।
यसपाला केही नयाँ सदस्यहरु समेत थपिएका छन् । तरपनि ४६८ मातदाताहरु मात्रै सहभागी हुन पाउने अवस्थामा माघ १६ गते निर्वाचन तालिका समेत तय भइसकेको परिषद् स्रोतले बतायो ।
साहसिक अर्जुनलाल ‘ज्युँदो सहिद’
युवा छँदैबाट साहसिक काम गर्ने छवि बनाएका प्रधान यतिबेला समाज सेवी र विकास प्रेमीका रुपमा ठमेल बजारभर चर्चित छन् ।
०४७ सालको जनआन्दोलनमा दरबारमार्गमा सहिद भएका मध्ये बाँच्न सफल प्रधानलाई परिवर्तनकारी युवाहरु भने ‘ज्युँदो सहिद’ का रुपमा समेत चिन्दा रहेछन् ।
आफू ज्युँदो सहिदका रुपमा चिनुनुको कहानी बताउँदै प्रधानले निर्माण सञ्चारलाई भने, ‘०४७ को जनआन्दोलनमा राजाको सालिकमाथि साथीहरु गए । म आफैं त्यसको अगुवाइ गरिरहेको थिएँ । कफ्र्यु लागिरहेको बेला सेनाले गोली हान्यो । भरे ४ जना साथीहरु सहिद भएछन् । बजारमा भोलिपल्ट मलाई पनि सहिद भयो भनेर चर्चा भएछ । तर म बाँच्न सफल रहें ।’
आफू बाँच्न सक्नुको कारण सेनाले हानेको गोली फोहोर फाल्ने फलामे ट्यांकीमा ठोकिएर बाँचेको उनको दाबी छ ।
भने, ‘म त्यो फोहोरको कन्टेर मुनि छोपिएँ । गोली फलाममा लागेर खस्थ्यो । पछि एकजना साथीले लुकाएर जोगाएका थिए । म यसरी बाँच्न सफल भएँ ।
अरुले बिगारको छवि धुँदै विकास प्रेमी प्रधान
यतिबेला प्रधान चर्चामा हुने अर्काे कारण रहेछ युवाहरुबीच लोकप्रिय र विकासे कामको अगुवाइ । ठमेल जस्तो व्यस्त पर्यटन क्षेत्र, राजधानीको मुटु, त्यसमा पनि ठमेलकै पर्यटन विकास गर्न भनी गठित परिषद्को इतिहास हेर्दा, गएका केही नेतृत्वको छवि भने राम्रो देखिदैन ।
स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले रामशरण थपलियालाई भने नरुचाएको स्थानीय व्यवसायी नै बताउँछन् ।
‘तर, आजको दिनमा आएर भने हामीले सबैको मन जित्न सकेका छौं,’ प्रधानले भने, ‘बरु हामीले परिषद्कै छवि माथि उकास्ने गरी विकासका काम गरेका छौं । यहाँको सडक पिच र ढल विकासको काम गरिसकेपछि परिषद्को इज्जत यतिबेला माथि उठेको छ ।’
करिब तीन दशक पर्यटन तथा होटेल व्यवसायीकै रुपमा ठमेलमै बिताएका प्रधान आज युवा राजनीतिक वृत्तमा पनि त्यतिकै चर्चामा आउने गरेका छन् ।
अध्यक्षमै किन त ?
३० वर्षदेखि पर्यटन क्षेत्रकै व्यवसायी भएर ठमेलका उद्यमीहरुसँग सुखदुखको साथी भएको उनको अनुभव पनि कमजोर छैन ।
उनी नै यस्ता उम्मेदवार हुन् जसले स्थानीयदेखि उद्यमीका रुपमा दशकौंदेखि ठमेलमा व्यवसाय गरिरहेका सबैको मर्का बुझ्ने ल्याकत राख्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘म सबै पर्यटन व्यवसायी, होटेल तथा रेस्टुराँ व्यवसायीको सुखदुखको साथी हुँ कि जस्तो लाग्छ । किनकि भूकम्पका बेलामा पनि यहाँ धेरैको उद्धार, राहतको काम गर्न मेरै अगुवाइमा हामी सफल भयौं । म यहाँका हरेक व्यवसाय, घरधनी र पर्यटन उद्यमीको व्यथा बुझ्न सक्षम पनि छु जस्तो लाग्छ । त्यसैले मैले नै केही गर्नु पर्छ कि यो क्षेत्रमा भनेर यो पटक चाहिँ ब्याक हुनै नसक्ने गरी अध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ ।’
भूकम्पमा घर घरमा उद्धार
भूकम्पले नेपालको पर्यटन क्षेत्र लगभग ३ वर्ष थला नै पर्यो । त्यसताका ठमेलका घर घरमा मान्छे जान मान्दैनथे । गाउँ टोलको सुरक्षा गर्ने युवा दस्ताको नेतृत्व गरेर प्रधानले सबैको मन जित्ने काम गरेका थिए ।
भूकम्पका बेला, गैरीधारमा रहेको होटेल बजेट र नजिकैको भत्केको घरको एउटा घतलाग्दो कहानी छ । निर्माण सञ्चारसँगको साक्षात्कारमा उनी भन्दै गए, ‘घरको एकतिरको पूरै गारो भत्किसकेको र सिंगो घर नै होटलमा गएर जोतिएको थियो ।
लत्ताकपडा, खाद्यान्न, नगद र जिन्सी समेत घरभित्रै पुरिएको थियो । घरधनी बिचरा श्रीमतीजीको उपचार गर्दा गर्दा थकित भइसकेका थिए । तर, उनको सबै श्रीसम्पत्ति घरभित्रै थियो । घरभित्र पसेर उद्धार गर्न न सेनाले सक्यो न सशस्त्र प्रहरीले नै ।’
उनले आफूले नै रिस्क मोलेर घर भित्र पस्न सफल भएको देखेपछि स्थानीयहरुले आफ्नो घरको सुरक्षाका लागि समेत अर्जुनलालले केही गर्न सकेको भन्दै बधाइ दिएको उनी सम्झन्छन् ।
भिजन के के ?
उनले आगामी दिनमा ठमेल क्षेत्र सभ्य पर्यटन व्यवसायको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेका छन् । सभ्यता चिनाउने सहरमा मानिस मानिसले सबैलाई उच्च सम्मान गर्ने उनको बुझाइ छ । पर्यटन क्षेत्र ठमेलले सभ्यता चिनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘ठमेलमा आएको यौटा पर्यटकले पनि सांस्कृतिक सहरमा पसेको महसुस गर्न सकोस् । जहाँ चारैतिर पुराना हिटीधाराहरु होउन्, ठमेल क्षेत्रभित्र धुलो, धुवाँ, ट्राफिक जाम नरहोस्, यतिसम्म कि कुनै पनि पर्यटन व्यवसायीले आफ्नो पसल बन्द नगरी घर गए पनि चोरी नै नहोस् । माग्नेहरुले पर्यटकलाई नसताउन् । यो सबै काम गर्न नेतृत्वको आवश्यकता मैले महसुस गरेको हुँ ।’
उनी हचुवाको भरमा भेइकल फ्री जोन घोषणा गरिएको ठमेलको अझै व्यवस्थित गर्न चाहन्छन् ।
ठमेलमा बढदै गएको अराजकता नियन्त्रण गर्न उनले व्यवस्थित ठमेल युवा व्यवसायीको सञ्जाल नै बनेर भोलेन्टियर काम गर्ने बताए ।
उनले ठमेललाई २४ सै घण्टा खुल्ने बनाउने प्रण गरेका छन् ।
घरधनी र व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन उनले सबै समेटिएको रचनात्मक समूह गठन गर्ने र सबैले सबैका लागि सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्ने बताए ।
पार्किङ र घरभाडा समस्या समाधान गर्न परिषद्मा आफूले जितेदेखि नै नयाँ भिजनका साथ काम गर्ने उनको अठोट छ । ठमेलको सबैभन्दा घिनलाग्दो समस्या भनेको अव्यवस्थित ट्राफिक पनि हो ।
जसको समाधान गर्न महानगरपालिका, सरकारको पर्यटन मन्त्रालयसँगै मिलेर काम गर्ने उनको योजना छ ।
ठमेलको अस्तव्यस्तता नियन्त्रण गर्ने, चोरी र सडक बालबालिका समस्याको समाधान गर्ने, पर्यटकसँग जबरजस्त गरेर पैसा माग्नेहरुलाई संरक्षण वा सुधार गृह बनाएर सल्टाउने भिजन उनले बताए ।
त्यसका लागि महानगर, सरकार, प्रहरी र स्थानीयबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्ने उनी बताउँछन् । ठमेलमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नै कमजोर भएको पर्यटकहरुको गुनासो छ ।
ठमेललाई डिजिटल ठमेल बनाउने उनको सपना छ । डिजिटल ठमेलमा सफा पानी, शौचालय जहाँ पनि पाइने छ भने सडक व्यवस्थापन नमूना नै बन्ने छ ।